Fitsaram-bahoaka : odian-tsy hita ny fahadisoan’ny fitondram-panjakana | NewsMada
Fitsaram-bahoaka : odian-tsy hita ny fahadisoan’ny fitondram-panjakana
Par Taratra sur 03/03/2017
Resabe ny fitsaram-bahoaka. Inona na iza no fototry ny olana? Odian-tsy hita ny fahadisoan’ny fitondram-panjakana. Famakafakana…
Ataon’ny mpitondra fanjakana sesimontotra ho vahaolana amin’ny fitsaram-bahoaka ny fampahafantarana lalàna mirongatra etsy sy eroa. Ao anatin’izany ny mpitsara, mpitandro filaminana, mpitantana raharaham-panjakana… Ampy hahavaha olana ve izay?
Hatramin’izao, tsy misy manontany tena hoe: nahoana no mirongatra be ny fitsaram-bahoaka amin’izao fitondrana izao? Amin’izao fitsarana izao, fitandroana filaminana izao, fitantanan-draharaha-panjakana izao… Amin’izao fitondrana izao ve vao hoe tsy mahalala lalàna tampoka ny vahoaka ifotony?
Nanao ahoana talohan’ny tsy nampirongatra be ny fitsaram-bahoaka toy izao saika manerana ny Nosy? Nanaja sy natahotra fadiranovana fanjakana sy mpitondra fanjakana ny vahoaka: ny an’ny fanjakana, lolohavina; fa ny an’ny tena, sakelehina. Toy izany koa ny fahatahorany fitsarana, mpitandro filaminana…
Very hasina ny mpitondra fanjakana
Nahoana no lasa tsy misy hasina ho azy na tsy atahorana intsony ny manampahefana sy ny mpitondra fanjakana? Anisan’ny mahatonga ny fitsaram-bahoaka izay, fa tsy hoe indray tsy mahalala sy tsy miraharaha lalàna tampoka avokoa ny olona: mitovy hevitra sy fihetsika ho azy amin’ny fitsaram-bahoaka.
Heverina ho tsy mahalala lalàna ka mila fampahafantarana ny vahoaka. Nefa ireo mahalala toy ny mpitondra aza: tsy hitany hotahafina amin’izany. Ireny nafitsoky ny polisy nandoro tanàna tany Befandriana Avaratra ireny. Izay ilay tsy mampisy hasina ny mpitondra. Manampy trotraka ny kolikoly, ny fisian’ny tsimatimanota, ny kiantranoantrano, ny tsy fangaraharana amin’izay atao…
Heverina ho bado hatrany vahoaka
Tsy mahagaga raha tonga ho azy ny tsy fahatokisana ny mpitondra, nefa minia mikimpy sy tsy miaiky izay fahadisoany amin’izany. Ny fiampangana ny vahoaka ho tsy mahalala lalàna ihany no asesika. Tsy vao mainka hampirongatra ny fitsaram-bahoaka ve izay?
Tsy misy fifampidinihana izay hoe vahaolana, fa mandeha ila ametrahana ny vahoaka ho toy ny zaza sy bado. Tsy mahalala lalàna tsinona. Hiverina ho azy amin’ny fampitandremana sy fampitahorana amin’ny lalàna sy ny fampiharana izany ve ny fahatokisan’ny vahoaka ny mpitondra efa very hasina aminy?
Efa endriky ny fipoahana na fikorontanana sosialy ny fitsaram-bahoaka, tsy fankasitrahana intsony ny fitondrana sy ny ataony?